လူကြိုက်များသောဂိမ်းကစားနည်းဖြစ်လာရန်နည်း REAL LIFE ၌ Minecraft SIMS ကိုသာတီးပါ - La La Life Games မှပြုလုပ်သော
ကျွန်ုပ်တို့၏ကစားသူများမည်သို့နာမည်ကြီးလာသည်ကိုသိသည်။ TikTok နှင့်ကျောင်း STAR ကျွန်ုပ်တို့၏ရယ်စရာဗီဒီယိုသစ်ကိုကြည့်ပြီးကျော်ကြားမှုများစွာကိုရှာဖွေပါ။
#lalalife #game #sims #justdance #minecraft #school #နာမည်ကြီး #nerd #loser #future
@La La Life ဂိမ်းများ
https: //open.spotify.com/playlist/1cn ...
Google တေးဂီတ - https://bit.ly/3me5Fkp
00:00 JUST DANCE ၏အစစ်အမှန်ပရိတ်သတ်
04:20 Nerd GIRL မိန်းကလေးများသည် DANCE ကိုသင်ယူသည်
၀၆:၅၅ TikTok STAR
၁၇:၄၀ TikTok ကျော်ကြားမှု
မွေးနေ့ ၂၀း၃၀
၂၃း၃၀ အချိန်စက်
၂၄း၃၀ ကျောင်း
La La Life SHOP: https://amzn.to/2IrvS0r
ဤဗီဒီယိုသည်ဖျော်ဖြေရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည့်စုံမှု၊ လုံခြုံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အာမခံချက်မှမပေးပါ။ ဤဗီဒီယိုတွင်ပါ ၀ င်သောမည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမဆိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုနှင့်အပျက်အစီးများနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ပုံတူပွားရန်စီစဉ်လျှင်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်ကြည့်ရှုသူ၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါဗီဒီယိုသည်ထိန်းချုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သရုပ်ဆောင်များလုပ်ဆောင်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖော်ပြနိုင်သည် - သင်ထပ်တူပြုလုပ်လိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကိုသုံးပါ။
My Family VS Games | If My Parents Became Superheroes – by La La Life Games
WHO DRAWS IT BETTER? || Funny Art and Different Challenges by RATATA BOOM
GOOD Student Vs BAD Student || Types Of Students At School! How to Become POPULAR
HOW TO BECOME POPULAR OVERNIGHT – Tik Tok memes La La Life (Music Video)
OMG! I'm IN A VIDEO GAME! – Problems Every Girl Can Understand - VFX music video by La La Life Games
Rich Food VS Poor Food | Funny Chocolate Fondue Challenges & Summer Hacks by RATATA
YOUR FAMILY vs MY FAMILY | Incredible FAMILY | GAMES Abilities in REAL LIFE – by La La Life Games
Older Child vs Younger Child || Funny Situations In The Family by Teen-Z
RICH Girl vs BROKE Girl || Funny musical by La La Life GOLD